सरकार जनताले बोल्न पाउने अधिकार खोस्दै छ - Nepal Khoj
२०७६ चैत्र २० , बिहिवार English
होम / हाइलाइट-समाचार / / सरकार जनताले बोल्न पाउने अधिकार खोस्दै छ
सरकार जनताले बोल्न पाउने अधिकार खोस्दै छ
२०७६ माघ १६ , बिहिवार प्रकाशित
नेकपाको नेतृत्वको दुई तिहाई जनमतको सरकारले मुलुक हाँकिरहँदा जनता अझै पनि खुशी हुन सकेका छैनन । सरकारले गरेका कामहरु विवाद रहित हुन सकेको छैन । तर प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सजग गराउने भन्दा पनि आफ्नै आन्तरिक कलहबाट बाहिर निस्कन सकेको देखिँदैन । सरकारको कामकार्वाही र प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सांसद रहेका पूर्व राज्यमन्त्री दिपक खड्कासँग वैकुण्ठप्रसाद भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंश ः
० नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले हरायो, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने आरोप छ नि ?
होइन, नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली जनताले प्रतिपक्षी दलका रुपमा नै निर्वाचित गराएर पठाउनु भएको हो । हामीले संसदमा प्रतिपक्षी दलकै भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं । नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्ने भएका कारण हामीले गरेका हरेक काम साधारण कार्यकर्तासम्म पुग्न गर्दछ । त्यसकारण पनि यो अवस्थाको आशंका गरिएको हुनु पर्दछ । सरकारले गरेका जनता विरोधी कामका विरुद्ध हामीले संसदबाट आवाज उठाईरहेका छौं । सरकारले ल्याएका जनविरोध नीतिहरुको विरोध विधिसम्मत रुपमा गरेका छौं । हामी तोडफोड र हिंसामा विश्वास नगर्ने भएका कारण पनि त्यस्तो देखिएको हुन सक्छ ।
० तर जनताले थेग्न नसक्ने गरी महंगी बढिरहेको छ, जनतामा सन्त्रास बढिरहेको छ कांग्रेस खै त बोलेको ?
बोलीरहेका छौं । संसदमा कुरा उठाईरहेका छौं । अल्पमत र बहुमतको सरकार बनाउने खेलका कारण देशमा विकास हुन सकेन भनेर जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई बहुमत मात्र होइन दुई तिहाई नै दिनु भएको छ । जनताले दुई तिहाई मत किन दिनु भएको हो भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरुले बुझ्नु पर्यो । के जनताले यही अवस्था देख्न र भोग्नका लागि सरकारलाई दुई तिहाई मत दिएको हो त ? सरकारले जनतालाई गर्ने व्यवहार यही हो त ? हामीले सडकमा होइन सदन मार्फत सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छौं । अन्याय अत्याचार बढिरहेको छ । कांग्रेस चुप लागेर बसेकै छैन संघदेखि प्रदेशसम्म हामीले आवाज उठाईरहेका छौं तर हाम्रो आवाजको सुनुवाई सरकारले गरेको छैन ।
० सरकारले प्रतिपक्षी दलको आवाज सुनेन भन्दा पत्याउँछन् जनताले ?
जनतालाई थाहा छ । वर्तमान सरकारको रवैया दादागिरी । सरकार तानाशाही रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । जनताले बोल्न पाउने अधिकार खोस्दै छ । चौथो अंगका रुपमा रहेका पत्रकारिता क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले चौतर्फी रुपमा विरोध गरिरहेका छ । हो हामीले हाम्रा आवाजहरुलाई भीडमार्फत पोखेनौ विधिसम्मत रुपमा राखेका छौं त्यसैले सरकारले दवाईरहेको छ ।
० कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण त्यसको फाईदा सरकारले लिएको छ भन्छन नि त ?
एक किसिमले हेर्ने हो भने त्यो पनि हो । हरेक राजनीतिक दलहरुको आआफ्नै कलह र आन्तरिक द्वन्द्व छ । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि भएको होइन । अरु दलहरुको कलह भित्रै लुकाईन्छ दवाव दिएर पनि तर नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि विषय तल्लोतहसम्मका कार्यकर्तासम्म पुग्ने भएकाले त्यसले ठूलो रुप लिएको जस्तो देखिन्छ । हामी एकलौटी र निरंकुशता लाद्ने पार्टी होइनौ । सम्पूर्ण कार्यकर्ता पाटीका नेताहरुवीच वहश छलफल गरेर नै समस्याको समाधान गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने गरेका कारण त्यस्तो देखिएको हो । त्यसलाई कसैले कांगे्रसको कमजोरीका रुपमा लिन्छ भने त्यो उसकै लागि दूर्भाग्य हुन्छ ।
० त्यही भएर विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ता एक आपसमा झगडा गरेका हुन् ?
त्यसरी पनि लिनु हुँदैन । राजनीतिमा जो कोही पनि माथि पुग्छु भन्ने सोचले अगाडि बढिरहेको हुन्छ, संघर्ष गरिरहेको हुन्छ । त्यो आफूले गरेको संघर्ष र परिणाम पाउँदिन कि भन्ने आशंकाका भरमा देखिएको आक्रोश हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ । घरभित्रै त दाजुभाई दिदी बहिनीवीच द्वन्द हुन्छ भने यो त ठूलो पार्टी हो ।
० प्रसंग परिवर्तन गरौ, एमसीसीका बारेमा कांग्रेसको धारणा के हो ?
नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा नै भनिसकेको छ । एमसीसी नेपालका आवश्यक हो र छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि विदेशी दातृनिकायहरुले गर्ने सहयोग नेपाललाई अत्यन्तै आवश्यक छ । हामीले यस्तो सहयोगका विपक्षमा बोल्नु नै वेकार छ । अझ भन्ने हो भने सडक, जलविद्युत, पर्यटन क्षेत्रमा यस्ता लगानी अझ आउनु पर्दछ । एमसीसीको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । सरकारले सहज रुपमा यसलाई ल्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
० तर आर्थिक सहयोगसँगै अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिन्छ भन्ने कुरा के हो त ?
कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि आर्थिक सहयोग वा परियोजना दिनु फरक कुरा हो एमसीसीसँग अमेरिकी सेना भित्रन्छ भन्ने उचित होइन । सेना त विविन्न समयमा भित्र्याउने कुरा आएको थियो नि । त्यो त हामीले गर्ने निर्णय नेपालमा कुनै पनि हालतमा अरु देशको सेना भित्रँदैन भन्ने कुरा ढुक्क भए हुन्छ । नेपाललाई वास्तविक रुपमा नै समृद्ध नेपाल बनाउनलाई वाधा दिनेहरुले अहिले सेना भित्रिन्छ भन्ने हौवा फैलाएका मात्र हुन् ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कार्य कदापी स्विकार्य हुँदैन : महत
२०७६ चैत्र २० , बिहिवार
विदेशबाट आएर पनि सम्पर्कमा नआएका १ सय ८ जनालाई पक्राउ पूर्जि काटिँदै
कोरोना : बैंकहरुले गरे ४७ लाख सहयोग
कोरोना : सङ्क्रमण परीक्षण र पहिचानमा जोड दिन मोदीको आग्रह
नेपालमा कोरोनाको जोखिम थप चुलिदै, लकडाउनको पूर्णपालना गर्न आग्रह
नेपालमा छैैटौ व्यक्तिमा कोरोना पुष्टी
हिमानी ट्रष्ट मार्फत कोरोना रोक्न पूर्वराजाद्वारा रु दुई करोड सहयोग
२०७६ चैत्र १८ , मंगलबार
बन्ने संकेत देखिएन पुरानो बसपार्कमा भ्यू टावर (भिडियो सहित)
२०७६ फाल्गुन १५ , बिहिवार
कोराना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन चिनियाँ बैज्ञानिक हुआङ जिहुआले पत्ता लगाएको दावी
२०७६ फाल्गुन १३ , मंगलबार
तनाव मुक्त गर्ने हो भन आज आईतवार सूर्यदेवको आराधना गर्नुस् हेर्नुस तपाई आजको राशी
२०७६ फाल्गुन ११ , आइतवार
२०७६ माघ १० , शुक्रवार
यस्तो रह्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन (फोटो फिचर)
२०७६ माघ ९ , बिहिवार
Enquiry & News
+977 1 4430646
प्रकाशक: सरस्वती इभेण्ट्स प्रालि
सञ्चालक: सुवाश शर्मा
सम्पादक: वैकुण्ठप्रसाद भण्डारी
सूचना बिभाग दर्ता नं.: १४९२/०७६–७७
© 2020 Nepal Khoj . All rights reserved.